C/risaaq Xaji Catoosh oo qoray Faallo: Maxay kala yihiin wasiirrada cusub? - Caasimada Online
Home Maqaalo C/risaaq Xaji Catoosh oo qoray Faallo: Maxay kala yihiin wasiirrada cusub?
C/risaaq Xaji Catoosh oo qoray Faallo: Maxay kala yihiin wasiirrada cusub?
Xubnaha la soo qaadan karo waxaa ka mid ah wasiiradii horey uga midka ahaa dowladdii ra’iisalwasaarihii la riday ee Cabdi Faarax Saacid Shridoon; sida faarax Cabdiqaadir iyo Cabdikariim Xuseen Guuleed oo mar kale ka mid noqday dowladan cusub.
Xubnaha daadka qaaday
Baarlamaanka ayaa kalsoonida kala noqday Saacid kaddib markii ay madaxweynaha is khilaafeen
“Tiradan badan ee wasiirada xitaa looma heli karo goob ay ku shiraan, sidoo kale dhaqaale ahaan wadanka ma qaadi karo 54 wasiir”
Saddexda ilmo Sheekh
Balse aaqirkii xalayto ayay muuqatay in sadaxda mas’uul ee dalka ugu saraysa ee ilmo Sheekh (Xasan Sheekh, Cabdiweli Sheekh iyo Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari) ku wada qanceen 54-ta xubnood ee xukuumadan.
W/Q: Cabdirisaaq Xaaji Catoosh